Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in AfCFTA uu yahay halbowlaha dhaqaalaha Afrika – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in AfCFTA uu yahay halbowlaha dhaqaalaha...
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in AfCFTA uu yahay halbowlaha dhaqaalaha Afrika
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in guusha aagga ganacsiga xorta ah ee Qaaradda Afrika (AfCFTA) ay ka caawin doonto qaaradda inay ka gudubto qaar ka mid ah caqabadaha dhaqaale ee cakiran.
Madaxweynaha, oo ka hadlay faallooyinkiisa intii uu socday kulan uu la yeeshay Xoghayaha Guud ee AFCTA Wamkele Mene, wuxuu xaqiijiyay Kenya sida ay uga go’an tahay Aagga Ganacsiga Bilaashka ah ee Qaaradda Afrika iyadoo ay isu soo uruurineyso dowladaha kale ee Afrika inay si dhow ula shaqeeyaan xoghaynta hay’adda si loo hubiyo in heshiisyada ganacsiga qaaradda ay guuleystaan.
Isaga oo sii hadlaya ayuu sheegay in qorshahani uu kor u qaadi doono dadka si ay ula falgalaan dadka taas oo iyaduna kor u qaadeysa ganacsiga gobolka.
Hoggaamiyeyaasha Afrika, ee hoos taga Midowga Afrika (AU) waxay hore ugu heshiiyeen naqshad lagu wajahayo caqabadaha tirada badan ee qaaradda soo food saaray. Qorshaha ayaa loogu magac daray Agenda 2063.
Waxay dejisaa aragti, iyo kuwo kale, oo ah in la joojiyo dagaallada ka socda qaaradda, lana horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha, loona oggolaado xorriyadda dhaqdhaqaaqa qaaradda.
Aagga Ganacsiga Bilaashka ah ee Qaaradda Afrika, oo ah heshiiska ganacsi ee ugu weyn adduunka ee xorta ah marka laga hadlayo waddamada ku lugta leh, wuxuu dhaqan galay 1-dii Janaayo.
Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in hirgelinta buuxda ee AfCFTA ay dib u qaabeyn ku sameyn doonto suuqyada iyo dhaqaalaha gobolka oo dhan ayna kobcin doonto ganacsiga u dhexeeya quruumaha Afrika iyo sidoo kale wax soo saarka adeegyada, wax soo saarka, iyo qeyraadka dabiiciga.
Previous articleإثيوبيا وكينيا وأوغندا من بين دول مجموعة لتلقي COVID-19 لقاح بحلول نهاية فبراير
Next articleMadowga musharaxiinta oo shir kasoo saarey 8 february marka la gaadho iyo shirka dhuusamareeb
Taliban ayaa dishay, dhaawacay in kabadan 400 ciidan
Beesha caalamka Oo Ka hadashay gogosha Maamul Goboleedyada ee uu Fidiyey...